Gym Workout Legs Training App အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် APK（28.0MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Gym Workout Legs Training App
Google Play မှခြေထောက်များလေ့ကျင့်ခန်းအားကစားခန်းမသင်တန်းတက်ခြင်း, အသေးစိတ်သရုပ်ဖော်ထားသောခန္ဓာကိုယ်၏အစိတ်အပိုင်းများကိုအသေးစိတ်သရုပ်ဖော်ထားသောခန္ဓာကိုယ်၏လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ကာတွန်းကားများအတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောလေ့ကျင့်ခန်းများ။
Legs လေ့ကျင့်ခန်းအားကစားရုံသင်တန်း - ပေါင်, ကြွက်သားကြံ့ခိုင်ရေး, နွားသငယ်ကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းနှင့်အောက်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်လေ့ကျင့်ခန်းအက်ပလီကေးရှင်းသည်ရိုးရိုးလေးခြေထောက်များကိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဖြင့်ရိုးရိုးခြေထောက်ကြွက်သားများကြွက်သားများနှင့်အတူခြေထောက်များကိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လိုသောအမျိုးသားများအတွက်လက်လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်သည်။ ခြေထောက်များလေ့ကျင့်ခန်းအတွက်။
ဤလေ့ကျင့်ခန်းအက်ပလီကေးရှင်းသည်ပါးလွှာသောခြေထောက်များ, အဆီခြေထောက်များနှင့်အားနည်းသောခြေထောက်များအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ သင်သည်သင်၏ပြီးပြည့်စုံသောခြေထောက်များနှင့်ကြွက်သားကိုယ်ထည်နှင့်ပိုမိုယုံကြည်မှုရှိလာလိမ့်မည်။ 30 ရက်ကြာလေ့ကျင့်ခန်း Professional Profession အစီအစဉ်တွင်
တွင်သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သမျှသည်ခြေထောက်များကြွက်သားကြွက်သားများကြွက်သားကြွက်သားများကြွက်သားကြွက်သားများကြွက်သားကြွက်သားများကြွက်သားလေ့ကျင့်ခန်းများကိုရက် 30 အထိဖြည့်စွက်ရန်ဖြစ်သည်။
ခြေထောက်များလေ့ကျင့်ခန်းအားကစားရုံသင်တန်း - ပေါင်နှင့်နွားသငယ်လေ့ကျင့်ရေးအက်ပလီကေးရှင်းသင်တန်းများ - ပေါင်, ကြွက်သားကြံ့ခိုင်ရေး, နွားသငယ်နှင့်အနိမ့်ခန္ဓာကိုယ်၏လေ့ကျင့်ခန်းအက်ပလီကေးရှင်းများတွင်အောက်ပါကြွက်သားကြံ့ခိုင်ရေးသင်တန်းများနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်များတွင်ပါ0င်မည်။
ခြေထောက်ကြွက်သားအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုသာမကအစွမ်းသတ္တိကိုလေ့ကျင့်ပေးသည့်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုသာတည်ဆောက်ရုံသာမက, အကယ်. သင်သည်ခြေထောက်ကြွက်သားတည်ဆောက်ခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းကိုရှာဖွေနေဆဲဖြစ်ပါကကြွက်သားတည်ဆောက်ခြင်းအက်ပလီကေးရှင်းများ, ခြေထောက်များကိုယ်အလေးချိန်များ, > ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြံ့ခိုင်ရေးနည်းပြ
အားကစား, ခြေထောက်များကိုယ်အလေးချိန်များနှင့်အားကစားရုံများနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးအက်ပလီကေးရှင်းများရှိအားကစားရုံများကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြံ့ခိုင်ရေးနည်းပြများကဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ လေ့ကျင့်ခန်း, အားကစားရုံလေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အားကစားတို့တွင်အားကစားရုံနှင့်အားကစားရုံဖြင့်အားကစားရုံလေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အားကစားတို့တွင်အားကစားရုံလေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အားကစားတို့တွင်ပါ0င်သည်။
ပေါင်, ကြွက်သားကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်နွားသငယ်လေ့ကျင့်ရေးအက်ပ်တွင်ကြံ့ခိုင်ရေးတွက်ချက်မှုတွင်သင်၏ကယ်လိုရီများကိုလောင်ကျွမ်းစေပြီးသင်ပြုသောလေ့ကျင့်ခန်းတိုင်းကိုမှတ်တမ်းတင်သည်။ It also calculates your BMI (Body Mass Index) and BMR (Basal Metabolic Rate).
The Gym Fitness Muscle Trainer Workout app includesanutrition tab as well, where အစားအစာ၏အာဟာရဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့်ထိုအစားအစာ၏အခြေခံအချက်အလက်များကိုမှန်ကန်သောအချက်အလက်များရနိုင်သည်။ အချိန်တန်ရင်မှန်ကန်တဲ့အစားအစာတွေရဖို့သင့်ကိုကူညီပေးတယ်။
သင့်ရဲ့လိုချင်သောကိုယ်ခန္ဓာကိုရက်ပေါင်း 30 အတွင်းသင်လိုချင်သောခန္ဓာကိုယ်ကိုရယူပါ။
သင်၏ကြေးနန်းအဆင့်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသောကိုယ်ပိုင်4ရက်ပတ် (ရက်ပေါင်း 30) ။ သင်ရုံသာလုပ်ရမယ်။
Best Fitness Apps for 2022 (UPDATED!) | My4Favorite Picks